Fahan xumada culimada Islaamka – Kaasho Maanka
Wadaaddada islaamku waxyaalaha aysan fahmin waxaa ka mid ah qofku in uu camalkiisa xukumo ee uusan caqiidadiisa xukumin. Qofku waa uu tukan karaa oo awooddaas waa uu leeyahay, laakiin isaga oo aan Eebbe jiritaankiisa rumaysnayn ma uu samayn karo in uu rumeeyo, isaga oo rumaysanna ma uu samayn karo in uu beeniyo. Caqiidadu waa wax qofka isaga dhasha ee ma aha wax uu qofku kasbado, taasna diinta islaamku meelo ayey ku sheegtay oo waxa ay ku tilmaantay in hanuunku uu Eebbe ku xiran yahay, in kasta oo meelo ka sii badan ay ku sheegtay wax taas khilaafsan oo meelo badan dad lagu caayey waxa ay rumeeyeen ama beeniyeen, laakiin kolley wadaaddadu waxa ay sheegi doonaan in uusan Qur’aanku iskhilaafin.
Khaladaadka fakarka wadaadda ku jira waxaa ka mid ah in ay jiraan ama jireen dad diinta islaamku in ay xaq tahay rumaysan haddana diiddan ama diidey, taas oo caqliga aad uga fog, waayo qof rumaysan naarta iyo jannadu in uu naar in uu ku waaro doortaa caqliga ma geli karto. Ujeeddada wadaaddadu waa ay iska caddahay oo waxa ay rabaan in ay diinta ka dhigaan wax ay xaqnimadiisu caddahay oo dadka rumeeyey ay xaq cad aammineen, kuwa beeniyeyna ay xaqii oo u cad iska indhotireen, sidaasna ma aha oo haddii uu xaq sida qorraxda iska caddi jiro waa la isku waafaqi lahaa sida qorraxda la isugu raacay ee meel uun bay khiyaamo ka jirtaa.
Fakradaha aan shaqayn karin ee wadaaddada waxaa ka mid ah in diinta islaamka uu Eebbe wado oo uu isagu faafiyo, waana been iska cad oo taariikhda diinta iyo maanta oo aynu joognaba waxa aynu ku arkaynaa in ay diinta dad faafinayeen oo ay ku dadaalayeen in ay faafto, mana aynu dareemayno awood dadka aan ahayn oo diinta wadda, been iyo khuraafaadna dadku waa ay ku daaleen oo xaq bay u baahan yihiin. Weliba diinta islaamku waa diin diig badan loo daadiyo oo dadka lagu khasbo oo uusan qofku ikhyaarkii uu ku galay kaga bixi karin, isla markaas dadka rumeeyey la laayo oo la dilo midkii aan tukan, midkii sinaysta, midkii firqada talada haysa ka hor yimaada iwm.
Aragtiyaha gaagaaban ee wadaaddada waxaa ka mid ah in ay diinta iyo aqoonta casriga ahi iswaafaqsan yihiin, taas oo been cad ah, waayo diintu waxa ay sheegtay in ay jirto samo dhulka ka sarraysa, dhulkuna meel ka sarraysa ma leh oo dhinac kasta waxaa ka muuqda hawo buluuq ah oo xilligii diinta samo loo qayiin, waxa ayna diintu sheegtay in hawadaas baluugga ah ay xiddiguhu ku sharraxan yihiin, waxyaalahaas oo dhanna waxba ka ma jiraan oo xiddiguhu isku meel siman ma joogaan. Xagga maamulka iyo siyaasadda diintu aad bay uga danbaysa hababka casriga ah oo xataa diinta islaamku ma leh hab qeexan oo ay madaxda islaamku u soo baxaan si ay u noqdaan madax qaab loo raaco leh. Abuukar oo ugu horreeyey Cumar baa inta gacanta qabtay goob ka sheegay in uu isagu ammiir yahay, rag markaas meesha joogeyna waa ay ku raaceen ee ma sidaas ayaa ah si madax loo dooran karo oo ay ku heli karaan kalsooni ummadeed? Midda kale wadaaddada caddaalad laga ma sugi karo inta ay diin ahaan u rumaysan yihiin in ay dadku is addoonsan karaan, taas oo carabtii ama ummadihii hore ka jiri jirtey, maanta se aan suurtaggal ahayn. Diinta islaamku waa taariikh la soo maray, taariikhda la soo marayna la ma soo celin karo ee waa in waayo cusub looga guuraa, intaas ayeyna wadaaddadu garan la’ yihiin.
Wadaaddadu waa nimanka sheegay in aan dhulka la ka la xigin oo uu dhammaantiis Eebbe leeyahay, haddana meel kasta ka wada dagaal ay ku sheegeen in ay gaalo dhulkooda ka xoraynayaan! Marmar baad is oranaysaa diinta islaamka ma in dadka la jahawareeriyo ayaa loo allifey.